Izizinda Zokugcina umlando ze-ECONOMY - Thumela RELAY
UHinda Wafy, uMhleli Wezemicimbi, umsunguli we- "Kanye Kwesisikhathi" e-Abidjan
UWanda People, ubuhle bakhe buhambisana kuphela nobungcweti bakhe ekuhleleni imicimbi. Iqembu leWanda lizokuhambisa ekutholaka uHinda Wafy, umhleli wemicimbi kanye nomqambi wakhe ose-Abidjan. Wokudabuka eNigeria neMaliya, uHinda ...
I-Angola: ukulahlwa kwe- "Zenu" kuphawula ukuwa kwe-dos Santos - Jeune Afrique
UJosé Filomeno Dos Santos ngesikhathi kuvulwa icala lakhe ngoDisemba 9, 2019 eLuanda. © Joao da Fatima / AFP Judged kusuka ukuphela kuka-2019 ngenkohliso,...
ICameroon iphikisana nokuvuselelwa kwenkontileka ye-CEO yeCimencam, esolwa ngokweqa kwentela
(Ibhizinisi eCameroon) - Ngenkathi kusukela ngoJuni 5, 2020, uXavier Saint-Martin Tillet, onguMqondisi Ophethe (ADG) weqembu leLafargeHolcim Maroc Afrique (LHMA), une ...
Ukushintshaniswa kwesitoko: I-Jumia, iqembu le-e-commerce likhethe isisombululo okuxoxwe ngalo nabaphikisi baso.
Esikhundleni sokulwa isikhathi eside kwezomthetho, iqembu le-e-commerce likhethe isixazululo okuxoxwe ngalo nabadikibali balo. E-United States, ukufuna isinxephezelo kwezezimali kwesinye isikhathi kubaluleke kakhulu kunokufuna iqiniso. Ubufakazi balokhu ...
I-FuntuFawo Ivory Coast kusukela ngo-Agasti 7 kuya ku-15, 2020
I-Wanda People, ikaravani yethu ezinikele osomabhizinisi base-Afrika, ihlala phansi eCôte d'Ivoire futhi izotholakala kusukela ngo-Agasti 7 kuya ku-15 kwiJe Wanda Magazine. Umcimbi wakho uphakamisa osomabhizinisi base-Afrika abahlala kule ...
1 2 3 ... 64 olandelayo